सामाजिक मिडिया मास्टररीको लागि सानो व्यवसाय गाईड Martech Zone
शुक्रबार, अगस्त 30, 2013 Douglas Karr
म अझै पक्का विश्वास गर्दिन कि प्रत्येक व्यवसाय सामाजिक मिडिया रणनीतिमा लगानी गर्न तयार छ। एप्पल जस्ता कम्पनीहरू छन् जसले अविश्वसनीय ब्रांड, शानदार विज्ञापन, र उत्कृष्ट उत्पादनहरू छन् जुन उनीहरूको प्रयोगकर्ता समुदाय मार्फत मार्केटिंग ड्राइभ गर्छन्। एप्पलको बाँच्न र फस्टाउन सोशल मिडियामा सक्रिय हुनु आवश्यक छैन। अन्य कम्पनीहरू ग्राहकको सेवा र ग्राहक सन्तुष्टि मुद्दाहरूको साथ मापनको विपरित अन्तमा छन्। उनीहरूको प्रक्रिया र उत्पादनहरू ठीक नगरे सम्म सोशल मीडियालाई बेवास्ता गर्न राम्रो रणनीति हुन सक्छ।
तर बजार सेयर कब्जा गर्न, अधिकार निर्माण गर्ने, प्रभाव निर्माण गर्ने र उनीहरूको व्यवसाय बढाउन चाहने कम्पनीका लागि, सोशल मिडिया एक कम लागतमा, उच्च प्रयासको त्यस्तो तरीका हो। म भन्छु उच्च प्रयास किनभने यसको लागि तपाइँ र तपाइँको टीमबाट समय र समर्पण चाहिन्छ सामग्री उत्पादन गर्न र तपाइँको दर्शकलाई बढाउनको लागि मूल्य प्रदान गर्न र एक समुदाय निर्माण गर्न। यो विशेष गरी साना व्यवसायहरूको लागि सही हो जससँग मौद्रिक स्रोतहरू छैनन् 'खरीद गर्न' विज्ञापन बढ्नको लागि आवश्यक छ।
सामाजिक मिडिया एउटा सानो व्यवसायको मार्केटिंग योजनाको लागि महत्वपूर्ण भएको छ! लगातार प्रश्न हो: "कसरी तपाइँको व्यवसाय सामाजिक मिडिया मार्केटिंग को सक्दो फाइदा लिन सक्छ?" साना व्यवसाय गाईडमा सामाजिक मिडिया मास्टरमा फेला पार्नुहोस्, एक नयाँ इन्फोग्राफिक तपाईं द्वारा ल्याइएको MarketMeSuite र प्लेसेस्टर!